Markii aan jarida suugo basbaas cusub, annagoo gacmahayaga aan dareemayaa wanaag, waxa aannu ku samayn lahayn - China Lu Lu Beeraha Qalabka
Markii aan jarida suugo basbaas cusub, annagoo gacmahayaga aan dareemayaa wanaag, waxa aannu ku samayn lahayn
Maxjarka waa xawaash loo isticmaalo by qoysas badan, oo capsaicin ku dhex jira lagu cusbaynayaa karaa, laakiin ka dib markii aan la suugo basbaas qaban, annagoo gacmahayaga ku noqday casaan, xummad iyo xataa nixi, taas oo ah arrin ku suugo basbaas aad jarjartey.
basbaaska Maxjarka soo saaro piquancy maxaa yeelay, waxay ka kooban walax loo yaqaan capsaicin. Marka ay dadku ka gooyay suugo basbaas, Way fududahay si aad u hesho capsaicin on maqaarka, sida danbe ee gacanta iyo maqaarka u dhashay ee gacanta. Capsaicin wuxuu kobciyaa kartaa microvasodilation, oo ka soo maqaar cas, qandho iyo xataa Jidhidhico soo celin doonaa, dardar-shiid maxaliga ah.
Marna dhaq gacmahaaga biyo qabow. Waa maxay sababta? Tani waa sababta oo capsaicin ma aha L. biyo qabow oo aan nadiif lagu dhaqi karo. Markii ay dadka ay dhiiri-capsaicin, gacmahooda dhaqaya biyo qabow mar dhif ka dhigi kartaa cun cun ku tagaan. Sidaas daraaddeed, waxay isticmaalaan habab kale si ay u xaliyaan dhibaatada of basbaas suugo basbaas.
Waa maxay jidka in laga takhaluso waxaa ka mid ah?
1. Ka dib markii jaray suugo basbaas, tirtiri gacmaha la suuf aalkolo in hal jiho, gacmaha ku dhaq biyo nadiif ah, ayaa mar kale ka tirtiri qalalan, tirtiri saddex jeer ilaa astaamaha lagu dejin karaa.
2.Waxaa qadar yar oo ah khal sidoo kale loo isticmaali karaa in gacmaha ku dhaqo sababtoo ah khal waa acidic iyo loo jabiyo la capsaicin.
3, iyada oo aan geed isbonji la, gacmaha biyo kulul lagu dhaqo sidoo kale waa wanaagsan yahay. Capsaicin, in kastoo yar awood badan khamriga iyo khal, waa ka waxtar badan biyo qabow, sababtoo ah waxay soo saartaa capsaicin uumi diiqayo at heerkulka sare.
waqti Post: Sep-10-2018
Cinwaanka: todabaadkii City, Qingdao City, Shandong, Jiaolai Industrial Park
Waa maxay faa'iidooyinka of stem suugo basbaas cusub ...